တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နီပေါနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၉
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၂၄
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နီပေါနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Bhim K.Udas အား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နီပေါနိုင်ငံတို့သည် မိတ်ဆွေနိုင်ငံများ ဖြစ်ကြပြီး ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် နီပေါနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးသွားရောက်ခဲ့ရာ၌ နှစ်နိုင်ငံ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ် အကြား ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုးမြှင့် နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှု များကြောင့် ယခုအခါတွင် နိုင်ငံတော်အဆင့်ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်ဆောင်ရွက် လာနိုင်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခြင်း စသည့် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အကောင်းဆုံးအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ ဆက်လက်၍လည်း နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်ချင်း ဆက်ဆံရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများ ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ သင်တန်းသားများ အပြန်အလှန်စေလွှတ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခြားနယ်ပယ်များတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အခြေအနေများ၊ ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာဆိုင်ရာကိစ္စများတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးနှင့် ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များ အပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ကို ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
နပွေညျတျော၊ စကျတငျဘာ – ၂၄
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ နီပေါနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Bhim K.Udas အား ယနေ့ နံနကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာ ဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး (ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ နီပေါနိုငျငံတို့သညျ မိတျဆှနေိုငျငံမြား ဖွဈကွပွီး ဆကျဆံရေး ကောငျးမှနျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ ၂၀၁၇ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလတှငျ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ နီပေါနိုငျငံသို့ ခဈြကွညျရေးခရီးသှားရောကျခဲ့ရာ၌ နှဈနိုငျငံ၊ တပျမတျောနှဈရပျ အကွား ခဈြကွညျရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား ပိုမိုတိုးမွှငျ့ နိုငျရေး ကွိုးပမျးဆောငျရှကျမှု မြားကွောငျ့ ယခုအခါတှငျ နိုငျငံတျောအဆငျ့ခဈြကွညျရေး ခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျဆောငျရှကျ လာနိုငျခွငျး၊ ကုနျသှယျရေးနှငျ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုဆိုငျရာ သဘောတူညီခကျြမြား လကျမှတျရေးထိုးနိုငျခွငျး စသညျ့ နှဈနိုငျငံခဈြကွညျရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား အကောငျးဆုံးအခွအေနသေို့ ရောကျရှိလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ ဆကျလကျ၍လညျး နှဈနိုငျငံတပျမတျောခငျြး ဆကျဆံရေးနှငျ့ ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုမြား ပိုမိုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေား၊ သငျတနျးသားမြား အပွနျအလှနျစလှေတျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား၊ နှဈနိုငျငံကုနျသှယျရေး၊ ခရီးသှားလုပျငနျးမြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးနှငျ့ စီးပှားရေးဆိုငျရာ အခွားနယျပယျမြားတှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြား ပိုမိုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျနိုငျမညျ့ အခွအေနမြေား၊ ယဉျကြေးမှုအနုပညာဆိုငျရာကိစ်စမြားတှငျ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှု တိုးမွှငျ့ရေးနှငျ့ ခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြား အပွနျအလှနျလညျပတျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား ကို ခငျမငျရငျးနှီးစှာ အပွနျအလှနျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
မတ် ၂၆၊ ၂၀၁၉ Admin 0
စည်းကမ်းဆိုသည်မှာ တိုက်တွန်းချက်နှင့် တားမြစ်ချက်များဖြစ်ပြီး တပ်မတော်မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်နှင့်စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာ၊ လူမှုကွန်ရက်များ သုံးစွဲရာတွင် လုံခြုံရေးအသိဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်လို